Kitra – Lalao fitsapana : resin’i Kosovo tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 ny Barea | NewsMada
Kitra – Lalao fitsapana : resin’i Kosovo tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 ny Barea
Par Taratra sur 26/03/2018
Tsy voatazon’ny Barea de Madagascar ny Kosovo, teo amin’ny lalao fihantsiana sady fitsapana, nikatrohan’ny roa tonta. Resy tamin’ny isa tokana nanoloana an-dry zareo Kosovara, ny Malagasy.
Lavo tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0, nanoloana ny Kosovo ny Barea de Madagascar, nandritra fihaonan’ny roa tonta, natao ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny kianja Franconville, Paris. Baolina tokana, tafiditr’i Edon Zhegrova, teo amin’ny minitra faha-48, tamin’ny alalan’ny daka mandrivorivo, teny amin’ny 35 m, izay tsy azon’i Melvin Adrien, mpiandry tsatoby malagasy.
Anisan’ny nanimba ny toetsain’ny mpilalaon’ny Barea de Madagascar ka nampiova be ny endri-dalaon’izy ireo, ny “penalty”, tsy matin’i Zotsara, teo amin’ny minitra faha-34, rehefa namingana an’i Voavy Paulin, tao anaty faritra tsy azo ivalozana, ny vodilaharana Kosovara. Nidona tamin’ny tsatoby mantsy ny dakany ary dia nivoaka avy hatrany. Taorian’io, tsy nahavita nilalao tsara intsony i Zotsara fa toa lasa ambany ny moraliny.
Azo lazaina nefa fa nanjakan’ny Barea ary tena naveziveziny tanteraka ry zareo Kosovo.
Sahirana ny Barea fa niditra ny “Joker”
Nampiditra “joker” Kosovo, teo amin’ny fidirana faharoa ka anisan’izany i Milot Rashica sy i Elba Rashani. Nanao “pressing” ambony ihany koa ry zareo ka sahirana ny Barea, namoaka izany. Totoafo ny fanafihana hany ka sempotra ny fiarovantena malagasy, namoaka ny baolina. Lasa nanjakan’ny kôsôvara ihany koa teo afovoan’ny kianja. Tsara tazona ihany koa i Paulin, izay saika hiaingan’ny fanafihan’ny Barea. Marihina fa tena nanakorontana sy nanahirana azy ireo i Paulin.
Na izany aza, tara loatra ny fidiran’i Toby sy i Njiva. Nampisy aina sy niverenan’ny fanafihana indray mantsy izy mirahalahy. Resy ny Barea de Madagascar, saingy tsy nahamenatra ny endri-dalao nasehon’izy ireo. Ity no faharesena voalohany, ho an’i Nicolas Dupuis, hatramin’izay nitondrany ny Barea de Madagascar. Andrasana ny ho tohin’ny lalao satria mbola eo am-piresahana amin’ireo firenena hafa ny tomponandraikitra malagasy, ankehitriny.